WWE WrestleMania 23: Hondo yemabhirionari - Akakwira mashanu machisi kubva kuPPV - Wwe
WWE WrestleMania 23: Hondo yemabhirionari - Akakwira mashanu machisi kubva kuPPV
Makumi maviri nematatu pagore WrestleMania nyanzvi yekurwa pay-per-maonero chiitiko chakaburitswa neWorld Wrestling Varaidzo (WWE) chakaunzwa ne360 OTC uye chakaitika musi wa1 Kubvumbi 2007, kuFord Field muDetroit, Michigan. Chiitiko ichi chaive chekutanga WrestleMania kuFord Field uye yechipiri kuitirwa munzvimbo yeDetroit.
Imwe Mania yakaitika panzvimbo imwechete iyi yaive WrestleMania 3. Chiitiko ichi chakaona nyeredzi nyowani dzakachiita hombe mubhizimusi uye dzakasimudza nyeredzi dzakaita kuti kuvepo kwavo kunzwike. Zvese mune zvese, iyo showa inogona kuverengerwa 7.5 / 10 uye kune machisi akadzika pasi enhoroondo waya sevamwe epic WrestleMania machisi.
Mukuru Khali vs Kane
mangani madheti pamberi pehurukuro chete
Vanhu vazhinji vakanzwisisa Hogan achirova Andre the Giant
Iye Great Khali akanakidzwa nemwedzi mitanhatu yekutanga muWWE. Akaenda shure kwemazita makuru saiye Undertaker, Big Show uye Batista kutumidza mashoma. KuWrestleMania 23, kambani iyi yaida kuita Khali mumutambo usiri-wezita uchirwisa mumwe munhu anoenderana nezviyero zvemuviri, muchina muhombe mutsvuku, Kane.
Khali aimiririra RAW brand uye Kane aimiririra iyo SmackDown brand uye mutambo uyu wakatumidzwa seInterpromotional Battle Royal. Khali zvachose akange asina kana dambudziko naKane sezvo akaendesa hofori chokeslam uye akahwina mutambo mukati memaminitsi matanhatu.
10 zvinhu zvekuita kana uchinetseka
chii chiripo chekutaura nezvacho
kudzokorora zvakafanana kukanganisa kakawanda
zvekuita kana adzoka mushure mekubvisa
ndinomuda chaizvo here kana kuti ndakangosurukirwa
zvinorevei kuva nemweya wakasununguka
sei rudo rwuchirwadza zvakanyanya
sei achindichengeta kana asingandidi